Izinkolelo Zomphakathi Kwikhamera Yomzimba Ogqwalile - Izixazululo ze-OMG
Ukumoyizela! Ikhamera yamaphoyisa iyayiqopha
Ukusetshenziswa kokuqoshwa kwevidiyo ngamakhamera omzimba akugcini ngokuphoqa ukuthi amaphoyisa alandise, kodwa futhi kuwanika ithuluzi eliwusizo lokubona amandla nobuthakathaka bawo. Ukuqaliswa kwayo kungasiza ukulungisa ukuthembana kwezakhamuzi nobudlelwano bomphakathi neziphathimandla zasekhaya.
Izakhamizi azethembi izikhungo ezibhekele ukuzivikela. Ukubandakanyeka okusolwa ukuthi kwabandakanyeka kwamaphoyisa kamasipala kanye nezezimali, kanye nebutho ekuvinjelweni kweqembu lama-standardised ekuqaleni kokusa, akuzange kube nesandla ekuqedeni lokho kwesaba. Uma amacala okuhlukunyezwa, ukuphanga, ukuthumba kanye nokudlwengula ngamaphoyisa kubasolwa noma abasolwa ngokungezeleleka engezelelwa ezinsolweni eziningi, asingabazi isizathu sokukhathazeka kwesakhamuzi.
Kepha lezi zimo zokusebenzisa kabi igunya okukhona ukuthi zivele zingagcini ukuphela komthombo wokungabaza phakathi kwethu, maqondana nokubona kwezokuphepha kwabo nebutho lezobulungiswa. Ukuxhumana kwansuku zonke phakathi kwezakhamizi nemizimba yamaphoyisa, ngisho nasezilungiselweni zasendaweni, nakho kube nomthelela ekungathembani okuvamile. Ubufakazi balokhu ukuthi, njengoba kubonakala kwisibalo esilandelayo, phakathi kwe-2010 ne-2014, ngaphezulu kwamaphesenti ama-65 ababambe iqhaza kwi-National Survey of Victimization and Percept on Public Security, kubike izinga lokungazethembi okuncane noma ukungakholelwa nakancane kumasipala namaphoyisa okuhamba.
Elula njengokubeka ikhamera yevidiyo eshweni lamaphoyisa. Ubuchwepheshe obusetshenzelwa ukuhleleka komphakathi, futhi kungani kungenjalo, ekuveleni obala kokuqukethwe kanye nokumisa impi engathandabuzekwayo yamaphoyisa.
Umbono wokuthembana ngamaphoyisa
Ngokunikwa le ndawo yokungathembani okwandile, yini engenziwa ukulungisa ubudlelwano phakathi kwezakhamizi nemikhosi yezokuphepha yabo?
Kuze kube manje, impikiswano mayelana nokuqinisa amakhono amaphoyisa endawo nezakhamizi ezithembele kuwo igxile kumyalo owodwa wamaphoyisa.
Kodwa-ke, kuyadingeka ukucebisa impikiswano kazwelonke ngokusebenzisa izingxoxo zezindlela ezisebenzayo, ezifanele futhi ezifanele zokubheka izindlela zokubika zokuxazulula ukusetshenziswa kabi kwamandla kwezindikimba zamaphoyisa ezingeni lendawo kanye nokwenza ngcono ukuzethemba kwezakhamizi. Isiphakamiso esijabulisayo ukusetshenziswa kwamakhamera omzimba avumela ukuqoshwa kwevidiyo kwemisebenzi yansuku zonke yamaphoyisa.
Amakamelo womzimba asetshenziswe ngempumelelo emazweni amaningi, njengempendulo ezindabeni zokwethenjwa kanye nokwanda kwenkohlakalo nokusetshenziswa gwenxa kweziphathimandla phakathi kwamaphoyisa. E-United States, ngokwesibonelo, ucwaningo olwenziwe yi-Police Executive Investigation Forum (igatsha lokuphenya loMnyango Wezobulungiswa) lukhombisa ukuthi ukusetshenziswa kwamakhamera omzimba kuthuthukise sobala nokuziphendulela ezimweni zezikhalazo zezakhamizi nokukhonjwa nokulungiswa izindaba zangaphakathi. Futhi, ukuhlolwa kwemiphumela emibili, eMesa, e-Arizona, nakwenye eRialto, eCalifornia, kuphetha ngokuthi ukuqaliswa kokuqoshwa kwamavidiyo, ngamakhamera omzimba, kwehlise inani lezikhalazo zezakhamizi ngokusetshenziswa kwamaphesenti we-75 ne-60, ngokulandelana. amandla okweqile kwamaphoyisa endawo.
Ngokuvamile, ubufakazi besayensi kulobu buchwepheshe buholela emiphumeleni efanayo: kunomthelela omuhle ekuziphatheni komuntu komuntu lapho ezizwa ebonwa. Ngalo mqondo, izakhamizi azigcini nje ngokwenza imisebenzi yamaphoyisa kangcono kodwa amaphoyisa abika ukusebenzisana okuhle nezakhamizi ngemuva kokuqaliswa kwamakhamera agqokwa ngomzimba.
Lesi sixazululo sinamathiselwe kuzidingo zomongo, lapho ukungabethembi khona kuyinkinga enkulu. Kodwa-ke, kungaba yiphutha elikhulu futhi elibizayo ukungenisa ubuchwepheshe obuphumelelayo bokuphepha ngaphandle kokusungula uhlaka olululo lwezikhungo, noma ukuthuthukisa ingqalasizinda efanelekile yokusebenzisa kwayo.
Ukuze amagumbi omzimba akhiqize imiphumela enokulinganiswa futhi enhle, izishayamthetho, izinduna zamaphoyisa kanye nezakhamizi kumele zibheke izincomo nezifundo ezifundwe kwamanye amazwe asebenze lezo zinhlelo.
Isipiliyoni sikhombisa ukuthi ngaphambi kokucacisa impikiswano, kufanele sibheke lokhu okulandelayo:
Ugqugquzele ukuthi abaphathi abaxhumana kakhulu nezakhamizi yibona abaphethe amakhamera agqokwa ngomzimba ngoba bangawasebenzisa.
Qeqesha amaphoyisa ngokuphathwa kwamakhamera agqokwa ngomzimba, ngokusekelwe kuhlaka lwezomthetho nezincwadi zamaphoyisa ezisebenzayo.
Chaza imithetho yokusebenzisa ikhamera; ngokwesibonelo, lapho uphendula izingcingo eziphuthumayo, lapho ukwephulwa kwethrafikhi, ukuboshwa, ukuhlolwa, imibuzo kanye nokushushiswa kwenzeka. Isakhamuzi sinelungelo lokwazi ukuthi luzoqoshwa nini futhi sifune ilungelo laso lobumfihlo ezimweni ezibucayi.
Ukuxhumana ngokusobala, emaphoyiseni, izindlela kanye nemigomo yokuthi kuzoqoshwa nini futhi nini, ukugwema imiphumela emibi ekusebenzeni kwabasebenzi.
Dala ithimba lobuchwepheshe elinemigomo ekhanyayo lapho usabalalisa imininingwane, hhayi nje ukugwema ukuhlehlisa amasu okuphepha kepha futhi uqinisekise ukufinyelela olwazini nasobala.
Nwebisa amandla okugcina endawo, kungaba ngokuthumela kumaseva wenkampani yangaphandle noma ngokutshala imali kwingqalasizinda yokugcina yedijithali ekhaya.
Sungula inqubomgomo kazwelonke yokunquma ukuphelelwa isikhathi kokugcinwa kwamavidiyo aqoshwe, ngokuya ngokuzwela kwezehlakalo ezirekhodiwe.
Thatha izindlela zokuphepha kwi-cyber futhi usebenzise izindlela zokwenza ubuciko obukhombisa ubuqiniso nokungatholakali kokukhohlisa ukuqoshwa kwevidiyo.
Qinisekisa ukuthi imininingwane eqoqwe ngamakhamera omzimba isetshenziswa njengokokufaka okubalulekile ekuhlolweni kwamasu wokuphepha nasekuhlonzeni izindawo zamathuba.
Lokhu okungenhla kungenzeka inqobo nje uma ukusebenza kwayo kususelwa ebufakazini obuqinile kanye nohlaka oluqinile lwezikhungo. Amakhamera omzimba ayindlela esebenzayo okufanele icatshangwe empikiswaneni yokuguqulwa kwamanje kwamaphoyisa. Ngale ndlela, singathatha igxathu elibalulekile ukugwema, hhayi nje ukusebenzisa kabi igunya nokusebenzisa amandla ngokweqile kepha futhi nemicimbi njengeshwa.
Ukubuka okuphelele kwe-6176 Ukubuka kwe-8 Namuhla